Umkhiqizo Wakho NjengePlanethi - Isisebenzi Somphakathi | Martech Zone
Umkhiqizo wakho njengePlanethi - Isisebenzi Somphakathi
NgoLwesibili, Novemba 5, 2013 NgoMsombuluko, Novemba 4, 2013 Douglas Karr
Sajabula lapho sibona Wonke umuntuKomphakathi kanye nekhono lokusebenzisa abasebenzi bakho ukusiza ukukhulisa izwi lenkampani yakho kepha sisamangala ukuthi izinkampani eziningi zithule kangakanani. Siyabona ukuthi abanye abasebenzi bamane abaxhunyiwe, kepha lapho sibona izimpendulo ezimbalwa zivela enkampanini enezikhulu zabasebenzi, siqala ukuzibuza ukuthi yini enye okungaba yiphutha.
In Isisebenzi Somphakathi: Izinkampani Ezinkulu Zenza Kanjani I-Social Media Work, Ukumaketha okuluhlaza okwesibhakabhaka ihamba ngemuva kwezigcawu ngemikhiqizo eminingana ehamba phambili — njenge-IBM, i-AT & T, iDell, i-Adobe, iSouthwest Airlines, iCisco, i-Acxiom, neDomo — isusa isembozo ezindabeni eziphumelelayo zebhizinisi lezenhlalo eziqhube lezi zinkampani ngekhulu lama-21. Le mikhiqizo enqenqemeni yonke ifinyelele ekuqaphelweni okufanayo: indlela eya ebhizinisini lezenhlalo ilele ngokunika amandla isisebenzi senhlalakahle.
Hamba uhlole Isisebenzi Somphakathi ikhasi lokufika bese ubamba isahluko sesampula!